Health – Yuwa Aawaj
काठमाडाै : को'रोना संक्र'मणबाट सुरक्षित रहन मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म सबैले बुझिसके। तर, मास्क कसरी लगाउने र कस्तो लगाउने भन्नेमा धेरैलाई अन्यौल नै देखिन्छ । सबभन्दा ठूलो अन्यौल त एन–९५ मास्कले ल्यायो। कोरोनाको पहिलो लहर सुरू हुँदा भल्भ भएको एन–९५ मास्क सुरक्षित हुन्छ भनेर धेरैले त्यस्तै लगाए। पछि त्यो मास्क को'रोना संक्र'मण रोक्न भरपर्दो मानिएन। त्यसले मास्क लगाउने व्यक्ति सुरक्षित रहे पनि ऊ सं'क्रमित छ भने अरूलाई सुरक्षा नगर्ने कुरा सार्वजनिक भयो। कतिपय व्यक्तिले भित्र सर्जि'कल मास्क लगाएर बाहिर एन–९५ लगाएको पनि देखियो। हामीकहाँ सर्जि'कल मास्क वा एन–९५ मास्क दुई–तीन दिन लगातार लगाउने र धोएर फेरि प्रयोग गर्ने चलन पनि छ। के यस्तो गर्नु राम्रो हो ? यति मात्र होइन, कपडाको मास्क लगाउनु ठीक हो कि होइन र आफूलाई संक्र'मण नभए पनि मास्क लगाएर हिँड्न किन जरुरी छ भन्ने अन्यौल हामीकहा
स्वास्थ्य : मुटु शरीरको यस्तो अंग हो जसलाई स्वस्थ राख्न नसक्दा मानीसले कतिबेला आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनपुग्छ थाहा नै हुँदैन । बाहिर स्फूर्त देखिने व्यक्ति पनि मुटु अस्वस्थय भएकै कारण मृत्युको मुखमा पुग्न सक्छन् । जसरी शरीरलाई स्वस्थ राख्न खानपिनको आवश्यकता हुन्छ, त्यसरी नै शारीरिक व्यायामको पनि आवश्यकता पर्छ । दिनभरमा यस्ता शारीरिक व्यायाम तथा गतिविधि जरुर गर्नु पर्छ जो तपाईंको शरीरलाई आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता काममा योगा, जीम, खेलकूद, नृत्य या घरको कामकाज पनि हुन सक्छन् । यस्ता काम गर्दा तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्यका साथै मुटुलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्छ । आज हामी तपाईंलाई एकदमै सजिला कामबारे बताउँदै छौं जसबाट तपाईंले आफ्नो मुटु र शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्छ । भर्याङ (सिढी) चढ्नु तपाईंको घरमा होस् या कार्यालयमा भर्याङ (सिढी) त पक्कै पनि होला । यदि तपाईंले दिनमा १० मिनेट मात्रै लग
काठमाडौ : यसो त यस अघि पनि हामीले घ्यू कुमारी लाई प्रयोग गर्ने विधि र थुप्रै रोग हरु निको पार्ने विधि बताई सकेका छौं तर आज भने हामी त्यो भन्दा पनि सजिलो तरिका बाट सामान्य पी'ला खटि'रा बाट लिएर ठूलो रोगहरू समेत लाग्दा घ्यू कुमारी लाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा केही टिप्सहरु जानकारी गराउँदछौं कस्तो रोगमा कसरी प्रयोग गर्ने । कानको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदी मनतातो पारेर २/३ थोपा दाहिने कान दुखोमा देब्रे कानमा र देब्रे कान दुखेमा दाहिन कानमा हाल्ने र दुबै दुखेमा दुबैमा हाल्नाले ठीक हुन्छ । आँखाको रोग लागेमा : घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ । मस्तिष्कको रोगमा नित्य १ चम्चा घ्यू कुमारी खाने र तालुमा लगाउने गरेमा टाउको पोल्ने, पित्त विका'र आदि ठिक हुन्छ र मस्ति'ष्क ठण्डा हुन्छ । पुरानो ज
स्वास्थ्य : नेपालमा धेरै ठाउँमा घर वरिपरि वा गमलामा रोपेर नियमित प्रयोग गर्न सकिने लहरे जडिबुटी गुर्जो, यसले अमृत समान काम गर्दछ भनिन्छ । यसको लहरा लामो समय सम्म नसुक्ने हुन्छ । यसको प्रयोग गद्र्रा मात्रा मिलाएर खान नसक्दा शरीरलाई बेफाईदा गर्छ । कस्ता मानिसले सेवन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । गुर्जो सेवन गर्ने विधि १. ताजा गुर्जोको लहरा १० देखि ३० ग्राम सिलौटो, खल वा मि'क्स्चरमा पिसेर पानी राखी उमाल्ने आवश्यकता अनुसार अन्य जडिबुटी तथा मसला पनि संगै उमाली रस छान्ने । त्यसपछि १ चम्चा मह वा मिश्री मिलाएर नियमित विहान पिउने । २. सामान्य अवस्थाको रोगी वा निरो'गी व्यक्तिले तल दिइएको विभि अनुसार गुर्जोको सेवन गर्न सकिन्छ । तर व्यक्तिको उमेर र रोगको अवस्था अनुसार फरक मात्रा र विधिबाट प्रयोग गर्नुपर्दछ । अनुभवी वैद्य वा आयुर्वेदिक डाक्टारको सल्लाह अनुसार प्रयोग गर्नाले पूर्ण रुपमा लाभ पाउन स
१. थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुहोला । ९८ – ९९ व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो। १०० पुग्यो भने पारा'सिटामोल खानुहोला। शरीर दुखेमा र टाउको दुखेमा पनि पारासिटा'मोल खान सकिन्छ । २. पल्स अक्सि'मिटरबाट अक्सि'जनको स्तर नापिरहनुहोला। यदि ९४ भन्दा तल गयो भने घोप्टो परेर सुत्नुहोला। यसलाई प्रोन पोजि'सन भनिन्छ । पेटमा २ वटा सिरानी, टाउकोमा एउटा सिरानी र खुट्टाको गोलिगाँ'ठानेर एउटा सिरानी राखेर पेटको बलमा सुत्नुहोला। यसले फो'क्सोको क्षमता बढाउँछ । यसलाई प्राकृतिक भेन्टिलेटर पनि भनिन्छ । ३. भिटामिन सी २ पटक, जिंक २ पटक, भिटामिन डी हप्ताको १ पटक खानुहोला। आबश्यकता अनुसार पारासिटा'मोल, कफ सिरप र ट्याब्लेट खान सकिन्छ । ४. अक्सि'जनको मात्रा ९४ भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा वा खोकी लागिरहेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य गाह्रो भएमा घरमा नबस्नुहोला । यो नयाँ भेरिए''न्टले अचानक को'भिड निमोनि'या
स्वास्थ्य : गाढा हरियो रंगको तुलसी जस्तै स–साना पात हुने पुदिना वा पतिना प्रायः चटनी वा अचारको रुपमा खाने गरिएको वनस्पति हो । पुदिना नेपाल, भारत, चीन लगायतका देशहरूमा प्रायः पाइन्छ । बाह्ै महिना चिसो स्थान ठाउँमा भइरहने प्रायः गर्मीतिर फुल्ने गर्दछ । अचार, तरकारी आदिको रुपमा प्रयोग गरिने पुदिना ताजा एवं सुकाएर दुबै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । आयुर्वेदिक भनाइमा पुदिना स्वेद कारक, उष्ण, दीपन, एवं वायु कफनाशक, भोक बढाउने, म,लमू,त्रजन्य रोग रोकथाम गर्ने आदि गुणले भरिएको हुन्छ । यो खोकी, अजीर्ण लगायत विविध पेटका रोगहरुमा गुणकारी छ ।विभिन्न रोगमा पुदिनाको प्रयोग : १. अपच - दिनहुँ खानाको साथमा आधा चम्चा पुदिनाको रस वा ५/६ वटा ताजा पुदिनाको पात वा केही मात्रामा यसको अचार खाएमा अपच भएको अवस्थामा फाईदा हुन्छ । २.पेट फुल्ने -पेट फुल्ने वा अजी'र्ण भएमा पुदिनाको १–२ चम्चा रस, केही मात्रामा
काठमाडौँ : गर्मीमा कागती पानी अत्यन्तै प्रभावकारी मानिन्छ । गर्मीमा यसलाई सर्वतको रुपमा प्रायोग गरिन्छ भने अन्य जुनसुकै समयमा पनि अचार बनाउने काममा बढी प्रयोग गरिन्छ । सामान्यतय कागती वा कागती पानी खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । मोटोपना घटाउन, शरीरमा उर्जा थप्न देखि हरेक किसिमले कागतीको फाईदा धेरै छ । कागती पानी अपच र कब्जियत जस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई अति उपयोगी मानिन्छ । तर यसको अत्यधिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । कागतीमा पाइने केही तत्वले स्वास्थमा जटिलता र दाँतमा समस्या निम्त्याउने गर्छ । कतिपय व्यक्तिहरुले कागती पानी खानु हुँदैन । १. मुटुका रो'गीहरु:- कागती पानीमा एसि'डको मात्रा धेरै हुन्छ । कागती पानीको धेरै प्रयोग गर्नाले ए'सिडिटी वढ्ने, मुटुको जलन र एसिड रिफलक्स जस्ता समस्याले सताउने गर्छ । मु'टुका रो'गीहरु कागती पानीबाट टाढा बस्नु नै फाइदा हुन्छ
अक्सर पूजापाठमा दुबो अनिवार्य मनिन्छ । दुबोको आर्युवेदमा खास महत्व छ । यसलाई महाऔ'षधी मानिन्छ । बाहिरी घाउदेखि भित्री रोगसम्म निको पार्ने क्षमता हुन्छ, दुबोमा । मधुमेहको जो'खिम कम गर्नदेखि र'क्तअ'ल्पताबाट बचाउनका लागि समेत उपयोगी हुन्छ, दुबो । त्यसो त यसलाई छालाको सौन्दर्यका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । आँखामा कुनै संक्र'मण भएमा दुबोको र'स निकालेर राम्ररी छानेर त्यसको केही थोपा आँखामा चुहा'उनुपर्छ, निको हुन्छ । दुबोको अर्को विशेषता भनेको, यो जहाँपनि सजिलै उम्रन्छ । अक्सर औषधिय गुणका बनस्पति दुर्लभ हुन्छ । तर, दुबो जताततै पाइन्छ । दुबोको यहि बि'शेषताको कारण त भनिएको हो, ‘दुबो जस्तो मौलाओस् ।’ आर्युवेदका अनुसार बहु'गुणी बनस्पति दुबोलाई जुसको रुपमा समेत सेवन गर्न सकिन्छ । दुबोको रसमा प्रोटिन, कार्बोहा'इड्रेट, क्या'ल्शियम, फा'इबर, पोटा'सियम प¥र्याप्त मात्रामा पाइन्छ । हरेक दिन
काठमाडौं : मुलुकभर गर्मीयाम चलिरहेको छ । यस्तो गर्मीयाममा जताततै पुदना पाइन्छ । पुदिनाका पातहरूमा कम क्यालोरी हुन्छ, भने प्रोटिन र राम्रो फ्याट पाइन्छ । पुदिनामा भिटामिन ‘ए’, ‘सी’ र ‘बी’ प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै छालामा पनि चमक ल्याउँछ । भारतीय चिर्चित आयुर्वेद विज्ञ डा. अबरार मुलतानीका अनुसार पुदिनाले रगतको पी'एचलाई अम्लीय हुन दिदैन । जसको कारण शरीरको थकाईको समस्याबाट बचाउँछन । विशेषत हामीले पुदिनाको विभिन्न चटनी बनाए खाने गर्छौं । यसरी पुदिनाको चटनीले रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ, किनभने पुदीनालाई फलाम, पोटासियमको राम्रो स्रोत मानिन्छ । यसले मेमोरीलाई बढाउँछ र हिमोग्लो'बिन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । यस्ता छन् नियमित पुदिना सेवनका फाइदाहरु… वजन घटाउन आयुर्वेद विज्ञ डा. अबरार मुल्तानीका अनुसार पुदिनाको चटनीलाई डाइटमा समावेश गर्दा वजन कम गर
स्वास्थ्य : तपाईंले सुन्दर र सुन्दर पारिजात फूलहरू लगाएको अवश्य देखेको हुनुपर्छ। तर, के तपाईंले कहिल्यै पारिजात उर्फ हर्सिंगारको पातबाट बनेको चिया पियाउनुभएको छ वा स्वास्थ्य र सौन्दर्य उपचारको लागि यसको फूल, बीउ वा बोक्राको प्रयोग गर्नुभएको छ ? यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, त्यसोभए तपाईंले यसको चमत्कारी औषधीय गुणहरूको बारेमा थाहा पाउनु आवश्यक छ। पारिजातका फूलहरूबाट पात, बो'क्रा र बीउहरू पनि उपयोगी छन्। यसको चिया स्वादमा उत्कृष्ट मात्र होइन स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा पनि धनी छ। तपाईं यस चियालाई बिभिन्न तरीकाले बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईंले स्वास्थ्य र सुन्दरताको धेरै फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा र विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि चिया बनाउने तरिकाहरू जान्नुहोस्ः जोर्नी'को दुखाइः पारिजातको पातहरू पिंधेर तिनीहरूको पिसाई पछि, यो पेस्टलाई पानीमा राख्नुहोस् र मात्रा आधा नघटाएसम्म उमालेर।